ARCore Support လုပ်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက် Measure App ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Google
25 Jun 2018 . 10:57 AM
Google ရဲ့ ARCore က လက်ရှိမှာ အချို့သော စမတ်ဖုန်းတွေမှာပဲ Support ပြုလုပ်နေသေးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ အဆိုပါ ARCore Support လုပ်တဲ့ Devices တွေမှာ တိုင်းတာနိုင်တဲ့ Measure App ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Google Measure App
အခု Measure App ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ အလင်းကောင်းကောင်းရပြီး ပြန့်ညီနေတဲ့ အရာတွေမှာ အရှည်နဲ့ အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို တိုင်းတာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Measure App ကို အသုံးပြုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာကို တွေ့ရပြီးတော့ ပုံမှန် ပေတံနဲ့တိုင်းတာသလိုပဲ တိကျတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် တကယ်လို့ ပေတံမပါလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင် ဒီ App က အသုံးဝင်မှာပါ။
Google က အခုလိုမျိုး တိုင်းတာမှုတွေအတွက် Measure App ကို ထုတ်ပေးလိုက်သလိုပဲ Apple ကလည်း iOS 12 မှာလည်း တိုင်းတာနိုင်တဲ့ Feature ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ အခု Android နဲ့ iOS ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Google ရဲ့ ARCore က လကျရှိမှာ အခြို့သော စမတျဖုနျးတှမှောပဲ Support ပွုလုပျနသေေးတဲ့ နညျးပညာတဈခုဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ အဆိုပါ ARCore Support လုပျတဲ့ Devices တှမှော တိုငျးတာနိုငျတဲ့ Measure App ကို ထုတျပေးလိုကျပွီးဖွဈပါတယျ။
အခု Measure App ဟာ အရာဝတ်ထုတဈခုခုကို တိုငျးတာတဲ့နရောမှာအသုံးပွုဖို့ဖွဈပွီးတော့ အလငျးကောငျးကောငျးရပွီး ပွနျ့ညီနတေဲ့ အရာတှမှော အရှညျနဲ့ အမွငျ့ဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာကို တိုငျးတာနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Measure App ကို အသုံးပွုကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာလညျး ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျတာကို တှရေ့ပွီးတော့ ပုံမှနျ ပတေံနဲ့တိုငျးတာသလိုပဲ တိကတြာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ တကယျလို့ ပတေံမပါလာတဲ့အခြိနျမြိုးမှာဆိုရငျ ဒီ App က အသုံးဝငျမှာပါ။
Google က အခုလိုမြိုး တိုငျးတာမှုတှအေတှကျ Measure App ကို ထုတျပေးလိုကျသလိုပဲ Apple ကလညျး iOS 12 မှာလညျး တိုငျးတာနိုငျတဲ့ Feature ကို ထညျ့သှငျးပေးလိုကျပွီဆိုတော့ အခု Android နဲ့ iOS ရဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုက ပိုပွငျးထနျလာတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
by 2B .2days ago
by Nigma . 1 week ago
by 2B .2weeks ago
Android 10 ကို နောကျဆုံးတော့ Update လုပျနိုငျပွီ